निषेधाज्ञाको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा भयो यस्तो डरलाग्दो पुष्टि — Sanchar Kendra
निषेधाज्ञाको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा भयो यस्तो डरलाग्दो पुष्टि
काठमाडौँ । निषेधाज्ञाको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा अर्को डरलाग्दो पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २ हजार ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले काठमाडौंमा १ हजार ४६४, भक्तपुरमा २३२ र ललितपुरमा ३५१ जनामा गरी कुल २ हजार ४७ जना थपिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि हिजो काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा गरी १९ सय ६६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यस्तै बितेको २४ घण्टामा नेपालमा थप ४ हजार ८९२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कोरोनाले सिकिस्त भए कुन अस्पताल जाने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- यी ३ नम्बरमा फोन गर्नुस
कोरोना संक्रमण भएपछि होम-आइसोलेसन बस्ने ठाउँ भएन, वा होम आइसोलेसनमा बसिरहेको व्यक्तिलाई समस्या बढ्दै गयो भने के गर्ने ?धेरैलाई यसबारे अलमल र दुविधा हुन सक्छ।
काठमाडौंमा त झन् आइसोलेसन कहाँ छ, कुन अस्पतालमा बेड खाली छ वा भेन्टिलेटर भएको ठाउँ कहाँ खाली छ भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा संक्रमित र उनीहरूका परिवार हतास हुनु स्वभाविक हो।
‘केही गर्नुपर्दैन। तपाईंले उल्लेखित नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। जतिबेला गरे पनि हुन्छ। त्यसमा फोन गरेर आफ्नो समस्या भन्नुस्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने।
यो सुविधा काठमाडौं उपत्याकामा मात्रै हो। तर आफू वा आफन्तलाई गाह्रो हुनेबित्तिकै आफैंले आइसियू वा भेन्टिलेटर खोज्न नहुने अधिकारीले बताए। पहिले मन्त्रालयमा फोन गरेर आफूलाई के भएको हो समस्या सुनाएपछि उनीहरूले भनेको ठाउँमा जान उनी सुझाउँछन्।
‘तपाईं आइसियू, भेन्टिलेटर नखोज्नुस्। छैन, तपाईं बेड खोज्नुस्, अस्पताल खोज्नुस् जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ जानुस्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीले के गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यहीँ जानुहोस्।’
कोही बिरामीले फोन गरेर आइसियू चाहियो भनेको आधारमा मन्त्रालयले आइसियूमा पठाउँदैन। किन भने सम्बन्धित बिरामीलाई आइसियू नचाहिन पनि सक्छ।
‘आइसियू चाहियो भनेर हुन्न खास एकैचोटि भन्टिलेटर नै चाहिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी तपाईंलाई पहिले स्वास्थ्य संस्था पठाउँछौं। त्यहाँ गएपछि स्वास्थ्यकर्मीले भन्नुहुन्छ के चाहिन्छ भनेर।’
मन्त्रालयको उक्त फोन उठाउने एक कर्मचारीले कसैको फोन आएमा आफूहरूले पहिला संक्रमितको अवस्था सोध्ने गरेको बताए। उनका अनुसार अक्सिजन लेभल कति छ, अन्य लक्षणहरू के छन् भन्ने कुरा सुरूमा सोध्छन्। त्यसपछि अस्पतालको सूची खोज्छन् र डाक्टरहरूलाई फोन गर्न थाल्छन्।
‘उहाँहरूले फोन गरेपछि हालचाल सोध्नु हाम्रो पहिलो काम हो। संक्रमितका लक्षण र अन्य विवरण टिपेपछि हामीले विभिन्न अस्पातलका फोकल पर्सनहरूलाई पालैपालो फोन गर्छौं,’ उनले भने, ‘जुन अस्पतालमा आइसियू खाली छ भन्छ हामीले मानिस पठाइदिन्छौं भनेर सूचना दिन्छौं। त्यसपछि यता बिरामीलाई फोन गरेर उक्त अस्पतालमा जान भन्छौं।’
बिरामी आफैं अस्पताल जान चाहेमा आफैं जान सक्ने र एम्बुलेन्स माग गरेमा खाली भएसम्म आफूहरूले नै पठाइदिने पनि उनले बताइन्। आइसोलेसन आइसियू वा भेन्टिलेटरमात्र होइन ती नम्बरहरूमा एम्बुलेन्स चाहिए पनि फोन गर्न सकिन्छ।
यस्तै कोरोना भारइसविरूद्धको ‘भेरोसेल’ नामक चिनियाँ खोप लगाउने व्यक्तिले दोस्रो डोज पनि काठमाडौंमै लगाउनुपर्ने भएको छ। खोप महाशाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार खोप कार्ड देखाएर भारतीय खोपको दोस्रो डोज काठमाडौंबाहिर पनि लगाउन सकिने भए पनि चिनियाँ खोप भने काठमाडौंमै लगाउनुपर्ने हुन्छ।
उनले चिनियाँ खोप सीमित आएका कारण काठमाडौंमा मात्र वितरण गरिएको भन्दै दोस्रो डोज लगाउने व्यक्तिले यहीँ लगाउनुपर्ने बताए। ‘जम्मा चार लाख जनालाई पुग्ने खोप भएकाले बाहिर पठाउन सकिएन। ‘रिस्क डेन्सिटी’ अर्थात् जोखिम घनत्वको हिसाबले पनि काठमाडौंमै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने भयो,’ डा. शर्माले भने।l चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज ‘भेरोसेल’ खोप अनुदानमा दिएको थियो।
सुरूमा उक्त खोप कसरी वितरण गर्ने अन्यौलमा परेको सरकारले पछि काठमाडौंमा रहेका निश्चित समूहका मानिसलाई लगाउने निर्णय गरेको थियो। पछि ती क्षेत्रका धेरै मानिसहरू खोप लगाउन आकर्षित नभएपछि सरकारले १८ वर्षमाथिका सबैलाई उक्त खोप लगाउने भन्यो।
पहिलो डोज लगाएकाहरूका लागि दोस्रो डोज पनि सुरक्षित भण्डारण गरिएको डा. शर्मा बताउँछन्। उनले पहिलो डोज लगाएको २८ दिनपछि दोस्रो डोज अभियान सुरू गरिने जनाए।
तर उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि धेरै मानिसहरू आ-आफ्ना गाउँ फर्किएका छन्। यदि तीमध्ये पहिलो डोज चिनियाँ खोप लगाउने व्यक्ति छ भने उनीहरूले दोस्रो डोज पनि उपत्यकामै लगाउनुपर्ने उनले बताए। भारतीय खोप लगाउने व्यक्तिले भने खोप कार्ड देखाएर दोस्रो डोज सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि लगाउन सकिने जनाए।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २१४ जनाको मृत्यु, कति थपिए नयाँ संक्रमित ?